လူကြီး မိဘများလုံးဝကျော်မသွားပါနဲ. ကလေးတွေ အသက်နဲ.ဆိုင်လို့ပါ – Tameelay
လူကြီး မိဘများလုံးဝကျော်မသွားပါနဲ. ကလေးတွေ အသက်နဲ.ဆိုင်လို့ပါ
ကလေးငယ်, လူမှုဘ၀, အထွေထွေဗဟုသုတ
ကလေးအဖေက သူ့မိန်မကို ကြိမ်းမောင်းနေတာ။
ကလေးနှာခေါင်းထဲ ပြောင်းဖူးစေ့ ဝင်သွားတာကို သူ့မိန်မ ကလေးကို ဂရုမစိုက်
လို့ဖြစ်ရတာဆိုပြီး ဒေါသတွေထွက်နေလို့ တော်တော် ဖျောင်းဖျယူရတယ်။
ဆေးရုံမှာ အိပ်ဆေးထိုးပြီးထုတ်တယ်။ကံကောင်းတယ်။ပြောင်းဖူးစေ့ ထွက်သွားတယ်။
“အခုမှ စိတ်အေးရတယ်ဗျာ…ကျိုင်းတုံသွားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့နော် ဆရာ..”
“လေးဖျန်းနေတဲ့ သူ့အဖွား လိမ်းဖို့ဝယ်လာတဲ့တိုင်းရင်းဆေးရည်ကို မှားသောက်မိလို့”
သောက်မိတဲ့ဆေးကြည့်လိုက်တော့ အိမ်မှာဖော်စပ်ထားတဲ့ပုံစံ။တံဆိပ်မပါ။ဘယ်လိုဖော်စပ်ထားတာလဲ မသိရ။
ပုလင်းကို နမ်းကြည့်တော့ အရက်နံ့ ရတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ မှားသောက်မိတဲ့ ဆေးထဲ အရက်များများပါပါစေလို့ ကျိတ်ပြီးဆုတောင်းရတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ အရက်ချည်းပဲသောက်မိရင်တောင် အချိန်တန်ရင် ပြန်ကောင်းလာမှာ စောင့်ကြည့်ရုံပဲ။အခုတော့..
ဘာတွေပါမှန်းမသိတော့ အရိပ်တကြည့်ကြည့်စောင့်ကြည့် ပြီး ကုသမှုပေးရတာပ။
ဆေးရုံမှာ သုံးရက်နေတော့ တော်တော်ကောင်းသွားလို့ ဆင့်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီ။မိဘတွေကို မှာရပြန်တယ်..
“ကလေးကို နောက်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် သေချာဂရုစိုက်ကြပါဗျ”
“ဆရာရေ…သုံးနှစ်သားကလေးတစ်ယောက် cefixime 200mg လေးလုံး(800mg)သာက်မိလို့”
cefixime က ပိုးသတ်ဆေး(antibiotic)…သူ့အရွယ်နဲ့ဆို သောက်သင့်တာထက်
ခြောက်ဆလောက် ပိုပြီးသောက်မိတယ်။အန္တရာယ် အရမ်းများတယ်။
မိဘတွေက မှားသာက်ပြီး နာရီဝက်အတွင်း ချက်ချင်းဆေးရုံရောက်လာတော့ အစာအိမ်ထဲက ဆေးကိုရသမျှ ဆေးကြောထုတ်(gastric lavage) လုပ်၊
အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ကုသပြီး ကောင်းသွာတယ်။
သံချောင်းတို့ အဖေ ကံကောင်းလို့ မသေပေါ့ဗျာ…
နောက်ဒါမျိုးဖြစ်တာတွေ နည်းအောင်လို့ Facebook ကနေ သတိပေးလိုက်ပါရဲ့ဗျာ။
ကလေးအဖကေ သူ့မိနျမကို ကွိမျးမောငျးနတော။
ကလေးနှာခေါငျးထဲ ပွောငျးဖူးစေ့ ဝငျသှားတာကို သူ့မိနျမ ကလေးကို ဂရုမစိုကျ
လို့ဖွဈရတာဆိုပွီး ဒေါသတှထှေကျနလေို့ တျောတျော ဖြောငျးဖယြူရတယျ။
ဆေးရုံမှာ အိပျဆေးထိုးပွီးထုတျတယျ။ကံကောငျးတယျ။ပွောငျးဖူးစေ့ ထှကျသှားတယျ။
“အခုမှ စိတျအေးရတယျဗြာ…ကြိုငျးတုံသှားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့နျော ဆရာ..”
“လေးဖနျြးနတေဲ့ သူ့အဖှား လိမျးဖို့ဝယျလာတဲ့တိုငျးရငျးဆေးရညျကို မှားသောကျမိလို့”
သောကျမိတဲ့ဆေးကွညျ့လိုကျတော့ အိမျမှာဖျောစပျထားတဲ့ပုံစံ။တံဆိပျမပါ။ဘယျလိုဖျောစပျထားတာလဲ မသိရ။
ပုလငျးကို နမျးကွညျ့တော့ အရကျနံ့ ရတယျ။စိတျထဲမှာတော့ မှားသောကျမိတဲ့ ဆေးထဲ အရကျမြားမြားပါပါစလေို့ ကြိတျပွီးဆုတောငျးရတယျ။
ဟုတျတယျလေ အရကျခညျြးပဲသောကျမိရငျတောငျ အခြိနျတနျရငျ ပွနျကောငျးလာမှာ စောငျ့ကွညျ့ရုံပဲ။အခုတော့..
ဘာတှပေါမှနျးမသိတော့ အရိပျတကွညျ့ကွညျ့စောငျ့ကွညျ့ ပွီး ကုသမှုပေးရတာပ။
ဆေးရုံမှာ သုံးရကျနတေော့ တျောတျောကောငျးသှားလို့ ဆငျ့ခှငျ့ပေးလိုကျပွီ။မိဘတှကေို မှာရပွနျတယျ..
“ကလေးကို နောကျဒါမြိုးမဖွဈအောငျ သခြောဂရုစိုကျကွပါဗြ”
“ဆရာရေ…သုံးနှဈသားကလေးတဈယောကျ cefixime 200mg လေးလုံး(800mg)သာကျမိလို့”
cefixime က ပိုးသတျဆေး(antibiotic)…သူ့အရှယျနဲ့ဆို သောကျသငျ့တာထကျ
ခွောကျဆလောကျ ပိုပွီးသောကျမိတယျ။အန်တရာယျ အရမျးမြားတယျ။
မိဘတှကေ မှားသာကျပွီး နာရီဝကျအတှငျး ခကျြခငျြးဆေးရုံရောကျလာတော့ အစာအိမျထဲက ဆေးကိုရသမြှ ဆေးကွောထုတျ(gastric lavage) လုပျ၊
အနီးကပျ စောငျ့ကွညျ့ကုသပွီး ကောငျးသှာတယျ။
သံခြောငျးတို့ အဖေ ကံကောငျးလို့ မသပေေါ့ဗြာ…
နောကျဒါမြိုးဖွဈတာတှေ နညျးအောငျလို့ Facebook ကနေ သတိပေးလိုကျပါရဲ့ဗြာ။
မိမိကိုယ်ကို ချစ်ပါ !
လူတိုင်းချစ်တတ်​ကြပါတယ်​။ ​​မွေးဖွားလာကတည်းကစပြီး အ​မေအ​ဖေကိုချစ်တယ်​၊ အသက်​ကြီးတဲ့အခါကိုယ့်​ရဲ့ လက်​တွဲ​ဖော်​ကိုရှာ​ဖွေပြီး ချစ်​ကြတယ်​။ လူတိုင်းနည်းလမ်း​ပေါင်းစုံနဲ့ ကိုယ်​ချစ်​တတ်​သလို အစွမ်း​ကုန်​ချစ်​ကြပါတယ်​။ သို့​သော်​မှားယွင်းစွာချစ်​မိတဲ့အခါ မလိုလားအပ်​တဲ့ နာကျင်​မှုကိုခံစားရ​တော့တာပါပဲ။ ကိုယ်​နဲ့မထိုက်​တန်​တဲ့ မှားယွင်းတဲ့သူတစ်​​ယောက်​ကိုချစ်​မိရင်​​တော့ အသည်းကွဲတဲ့ဒဏ်​ကို ခံစားရပြီး သတ်​​သေတဲ့အထိ ကျူးလွန်​ကြပါတယ်​။ -အချို့ကျ​တော့ မိမိကိုပစ်​သွားမှာစိုးလို့ အချိန်​တိုင်းအမြဲပူ​လောင်​​နေရပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်​သူ့ကို ပိုချစ်​မိတဲ့အတွက်​ တစ်​ခါတ​လေမှာ ကြည်​နူးရ​ပေမဲ့ …
သူတို့ဘ၀ကိုသူတို့ မုန်းတယ်ဆိုတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့မှာရှိနေတဲ့အရာတွေနဲ့ မပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါဘူး။ အကယ်၍ သင်လည်း အဲလိုပဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ- ချမ်းသာမှ၊ အောင်မြင်မှ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ အများကြီးရမှ၊ နာမည်ကျော်ကြားမှ၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုရှိမှ ပျော်ရွှင်မယ်ဆိုတဲ့ လူတွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ အဲလိုဆိုရင်တော့ မှားနေပါပြီ။ နောက်တစ်ကြိမ် …
ကိုယ့် အိမ်သားတွေ နေမကောင်းဖြစ်ရင် ဒီအစားအစာတွေ မကျွေးရဘူးနော် !
နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရှောင်ရမယ့် အစားအစာတွေရှိပါတယ်။ အိမ်ရှင်မတွေသာမက အိမ်သားအားလုံးသိထားမှ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး စောင့်ရှောက်နိူင်မှာပါ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကိုယ်ခံအား ခံနိုင်စွမ်း မတူပေမယ့် ဘာပဲပြောပြော သတိထားရှောင်ကြဉ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ နှာစေး ငှက်ပျောသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ရေခဲ၊ ဆိတ်သား၊ ဆေးလိပ် နှင့် အရက် …